२०७२ साल माघ २४ गतेका दिन कवि गोष्ठीको १८ औं प्रवाह शृङ्खला सम्पन्न भएको थियो । कलेजको हलमा राखिएको उक्त कार्यक्रम सेन्ट जेभियर्स साहित्यिक क्लबका अध्यक्ष (२०७२) अमिशा अधिकारीको अध्यक्षताममा संचालन गरिएको थियो । नेपाली साहित्यका महान् हस्ती बालकृष्ण समको जन्मदिनको पावन अवसरमा समको फोटोमा माल्यार्पण गरी कलेजका प्रधान्याध्यापक फादर अगस्टिन थोमस यस.जेद्धारा पानसमा दियो बालेपश्चात् कार्यक्रमले औपचारिकता पाएको थियो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति विष्णुविभु घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा सात जना प्रतियोगीहरुका बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यसैलगायत रेडियो नेपाल कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा. नवराज लम्साल, छन्दोबद्ध कविताका पारखी देवी नेपाल र पछिल्लो समय पृथक पहिचान बनाउदै गरेका युवा कवि नवराज पराजुली निर्णायकका भूमिकामा रहेका थिए । यसका अतिरिक्त गजलकार शितल कादम्बिनी तथा अन्य हास्यव्यङग्यकारहरु कार्यक्रममा मूख्य आकर्षणका केन्द्रबिन्दु थिए । साङ्गीतिक कोसेली र प्राध्यापक फादर अगस्टिन थोमस यस. जेको कवितावाचनबाट गति लिएको कार्यक्रममा थप आयाम एवम् उर्जा थप्न विभिन्न हास्यव्यङ्ग्य गजलकारहरु तथा कविहरुले आफ्ना रचना वाचन गरे ।
सात प्रतियोगीमध्ये कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्र सुजन अर्यालले प्रथम स्थान हाँसिल गर्न सफल भए । ‘मेरो कविता कस्तो कस्तो!’ नामक शीर्षकमा लेखिएको उक्त गद्य कवितामा देशमा विद्यमान रहेका विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध तीखो व्यङ्ग्यवाण प्रहार गर्दै समाज सुधारका लागि आह्वान गरिएको थियो । सामाजिक बेथितिहरुले पिल्सिएको यो राष्ट्रमा कुनै पनि कविताको जन्म असम्भव एवम् निरर्थक रहेको कुरा आफ्नो कविताको माध्यमबाट ज्यादै सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसै लगाएत दिृतीय स्थान हासिल गरेका स्नातक तहका सौरभ बस्यालको ‘दर्साली ठूल्दाइ’ नामक कविता पनि कम दमदार थिएन । ठूल्दाइ प्रतिनिधि पात्रको माध्यमद्धारा ग्रामीण परिवेशको चित्रण उनको कवितामा गरिएको थियो । ‘राष्ट्रवाद’लाई कवितामा मूल विषय बनाएका कक्षा बाह्रका सार्थक भट्टराईले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भए । सार्थकको कवितामा खोक्रो राष्ट्रियता निरर्थक एवम् मूल्यहीन हुने कुरालाई सशक्त रुपले प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसका अतिरिक्त वरिष्ठ कविहरुले पनि एकपछि अर्को गर्दै मर्मस्पर्शी एवम् व्यङ्ग्यात्मक कविताहरु पस्किन थालेपछि माहोल झन् हर्षउल्लासमयी भएको थियो। कवि नवराज पराजुलीका भावविह्ल कविताहरु त कहिले विष्णुविभु घिमिरेका ठटे्उला एवम् व्यङ्ग्यात्मक कविताहरुको निकै राम्रो तालमेल थियो । देवी नेपालका सुरमयी छन्दोबद्ध कविताहरु र डा. नवराज लम्सालका तिख्खर काव्यरसले वातावरणमा नौलोपन दिएको थियो । अन्तमा विजेताहरुलाई सम्मानपूर्वक पुरस्कार वितरण गरियो भने सबै प्रतियोगीहरुलाई खादा ओढाएर सम्मान दिइयो । क्लबका संरक्षक देबेन्द्र पौडेल र खेम प्रसाईँद्धारा आगामी वर्षमा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्दता सहित समापन गरिएको थियो ।